“Halyeeyo dib – u midoobay”, – King Cantona iyo Giggs oo ku kulmay Old Trafford+Sawiro – Gool FM
“Halyeeyo dib – u midoobay”, – King Cantona iyo Giggs oo ku kulmay Old Trafford+Sawiro
Kaafi May 5, 2016
(Manchester) 05 Maajo 2016. Waa sawir dib jamaahiirta Manchester United ee dunida dacaladeeda ugu soo celinaya xusuuso farxadeed.
Halyeeyo Ryan Giggs iyo Eric Cantona ayaa dib axadii u midoobay – 20 sano kaddib markii ay United ku guuleysatay Premier League-geedii saddexaad.
Waxa ay ku kulmeen Old Trafford kulankii ay bar bar dhac 1-1 la galeen kooxda dhowaan horyaalka loo caleemo saaray ee Leicester City.
Boga Instagram-ka Mancehster United ayaa sawirkan bulshada lagula wadaagay khamiistii, waxaana ku qornaa: “Halyeeyo, dib u midoobay.”
Giggs ayaa la sawiray isaga oo dhoola cadeenaya garabna taagan yahay Cantona, oo gacanta ku haya maaliyada xilli ciyaareedkan oo lambar toddoba ah.
Cantona, kaas oo ka tagay Man United 1997, ayaa dib ugu soo laabtay waqooyi bari safar gaar ah dartiis si uu dhaqaale ugu uruuriyo ciyaalka ku jira cisbitaalka Paris.
Waxa uu ka soo safray Paris ee dalka France, waxa uu 49-jirka United u dhaliyey 82 gool shan olole oo uu kooxda ka tirsanaa.
Cantona waxa uu la kulmay xiddigaha hada u dheela United kahor inta uusan waqti la qaadan saaxiibkiisii hore Giggs, hada tababare xigeenka Red Devils.
Faransiiska iyo Giggs-ba waxa ay kaalin lixaad leh ka qaateen labadii koob ee ay qaadeen dhinaca Sir Alex ferguson 1996, Premier League iyo FA Cup.
Giggs waxa uu dhaliyey gool kulankii ay 3-0 uga badiyeen Middlesbrough, ciyaar u xaqiijisay United Premier League halka Cantona uu shabaqa la helay goolka qura ee ay FA Cup-ka uga qaadeen Liverpool 11-kii Maajo.
Cantona oo khadka dhexe ka dheeli jiray waxa uu ciyaarta kabihiisa ka laalay isaga oo 30 jir ah kuna guuleystay lix horyaal oo uula qaaday United, Marseille iyo Leeds. United 1992 ayuu Leeds uga soo biiray.
Tan iyo markii uu Cantona ka tagay Red Devils, waxa ay qaaday 10 Premier League laakiin ilaa iyo 2013 kuma aysan guuleysan.
"Waxaan u qabay in aan Man United ku biirayo!" Toure oo City u bahdilay cadaw deriskooda....!